Kalafadhiga 37-aad ee baarlamaanka Puntland oo Garoowe ka furmay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeHomeKalafadhiga 37-aad ee baarlamaanka Puntland oo Garoowe ka furmay
Kalafadhiga 37-aad ee baarlamaanka Puntland oo Garoowe ka furmay
June 15, 2016 Abdi Omar Bile Home, Puntland, Somalia 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Kalafadhigii 37-aad ee golaha wakiilada Puntland ayaa maanta oo Arbaco ah ka furmay caasimada Puntland, Garoowe.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ku-xigeenkiisa Cabdixakiin Cabdulaahi Camay iyo xubno kamid ah golaha wasiirada ayaa ka qaybgalay kalafadhiga baarlamaanka.
Kalafadhigan oo noqonaya kalafadhigii 37-aad ee intii u jiray golaha baarlamaanka Puntland iyo kalafadhigii lixaad ee inta uu jiray baarlamaanka hadda jooga waxaa shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka kowaad ee baarlamaanka Cabdixamiid Shiikh Cabdisalaan.
Inta uu socdo kalafadhiga waxaa looga doodi doonaa la xisaabtanka haayadaha dowlada iyo ajandayaal kale, sida uu sheegay guddoomiye ku xigeenka.
Madaxweynaha Puntland oo khudbad ka jeediyay furitaanka kalafadhiga ayaa waxa uu khudnadiisa inteeda badan uga hadlay waxyaabaha ay qabatay xukuumadiisa intii u dhaxaysay kala fadhigaan 37-aad iyo kii 36-aad.
Madaxweyne Cabdiweli waxaa uu sheegay in dawladdu ay horumarro la taaban karo ka gaartay dhinacyada Ammaanka, siyaasadda, dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha, dhiirrigelinta ganacsiga, dhowrista deegaanka badda iyo berriga, soo celinta hannaanka dimuqraadiyaynta Puntland iyo kor u qaadidda iskaashiga caalamiga ah.
Cabdiweli ayaa sidoo kale hambalyo u diray ciidamada difaaca Puntland waxaana uu ku ammaanay guulihii lama illaawaanka ahaa ee ay kasoo hooyeen kooxihii argagixisada alshabaab ka tirsanaa ee duullaanka kusoo qaaday dhulka Puntland.
“Haddii gacanta cadowgu ku gaarto adigoo dalkaaga iyo dadkaaga u shaqaynaya waxaa tahay shahiid, haddii cadow kugu soo duuley aad iska difaacdana waxaa tahay Mujaahid” ayuu yiri Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali.
Isagoo ka hadlayay arrimaha Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali waxaa uu sheegay in dawladda Puntland ay dadaal dheeraad ah ku bixisay sidii dalka Soomaaliya looga saari lahaa wax ku qaybsiga qabiilka ee 4.5 isla markaana go’aan kama dambays ah oo dammaanad qaad leh laga gaarey in aan mar dambe dalka dib loogu celin hannaankaas oo hore u soo ragaadiyey dalka Soomaaliya.
Ugu dambayna, Madaxweynaha Puntland ayaa ugu baaqay Madaxda dawladda Federaalka Soomaaliyeed in ay waqtiga yar ee dhiman ay uga faa’iideyaan shacabka Soomaaliyeed ayna isla markaana ka shaqeeyaan hirgelinta doorashooyinka dalka ka qabsoomi doona bilaha August iyo September sidii lagu heshiiyey shirarkii Madasha watashiga qaran.
June 8, 2016 Guddoomiyihii ururka haweenka gobolka Mudug oo lagu dilay Gaalkacyo
June 8, 2016 Madaxweynaha Puntland oo Boosaaso dib ugu soo noqday
Things we learned from Puntland’s victory on war on terror
Xaaska ninkii geystay weerarka baarka Orlando oo la maxkamadayn doono
Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya oo dhiggiisa dalka Ruushka kulan kula yeeshay magaalada New York
New York-(Puntland Mirror) Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa dhiggiisa dalka Ruushka Segey Lavrov kulan kula yeeshay magaalada New York ee dalka Mareykanka. Labada masuul ayaa kulankooda uga wadahadlay aragtida ku saabsan dhisida [...]
At least 10 wounded in car bomb explosion in Kismayo town
Kismayo-(Puntland Mirror) At least 10 people were wounded in car bomb explosion in Kismayo town on Tuesday evening, security and medical sources say. The explosion occurred when a car packed with explosives blow up on a [...]